चैत १ गते शुक्रबारको दिन तपाईंको राशिफल यस्तो छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
चैत १ गते शुक्रबारको दिन तपाईंको राशिफल यस्तो छ ?
अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्ने छ । नयाँ वस्त्र एवं अलङ्कारको प्राप्ति हुनेछ।
सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ ।
सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । हल्लाको भर पर्दा दुस्ख पाइनेछ, तर मिहिनेत गर्दा प्रगति हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस सोमबार तपाईको राशिफलः कुन राशीको योग कस्तो?
मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । काममा केही प्रतिस्पर्धा र चुनौती सामना गर्नुपर्ला ।
अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धामा पकड भएको समय छ । पार्टी तथा सेमिनारमा सहभागी भईएला ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम पूरा हुनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय आएको छ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा)
छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय आएको छ ।
धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । धैर्य एवं लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ । तर अरुको भलाइका लागि दौडधूप गर्नुपर्ने छ ।
वैदेशिक,व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । कृषिव्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तोषजनक रहने छ ।
याे पनि पढ्नुस यस्ताे छ अाजकाे राशिफल र पञ्चांग
शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । सामान हराउने वा चोरी हुने सम्भावना छ । साँझमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ ।
शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । उन्नति एवं प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् ।
मुद्दामामिला र दैनिक काममा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्नेछ । सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । एजेन्सी